Qoryaha duugista - Waa maxay faa'iidooyinka ay u leedahay jirkeena | Bezzia
Susana godoy | 10/01/2022 10:00 | Quruxda
Qoriga duugista ayaa noqday mid ka mid ah aaladaha loogu isticmaalka badan yahay waqtiyadii ugu dambeeyay. Waa run in markii hore ciyaartoyda waaweyn oo kaliya ay ka faa'iideysan karaan laakiin hadda waxay u muuqataa in wax walba ay isbeddeleen oo qiimo jaban, waxaan horeyba u haysan karnaa mid ka mid ah gurigayaga oo aan ka faa'iideysan karno dhammaan faa'iidooyinka, kuwaas oo aan yarayn.
Ma taqaan dhammaan faa'iidooyinkeeda? Sababtoo ah waxaa laga hadlayaa caawinaad yaree murqaha. Laakiin waa run inay weli leedahay faa'iidooyin kale oo badan oo ay tahay inaad ogaato. Sidan waxaad ku ogaan doontaa inay noqon doonto saaxiibkaaga cusub inuu jidhkaaga siiyo fudayd badan oo uu kordhiyo waxqabadka. Laakiin aan u gudubno tallaabo-tallaabo si aydaan waxba kuu lumin.
1 Waxay si weyn u yaraynaysaa daalka muruqa
2 Waxay hagaajisaa wareegga
3 Caawinta cudurrada daba-dheeraada
4 Ciribtirka qandaraasyada
5 Waxay wanaajisaa dhaqdhaqaaqa jirka
6 Nasasho badan oo noloshaada ah
Waxay si weyn u yaraynaysaa daalka muruqa
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee qoriga duugista ayaa ah taas oo leh waxaad macsalaamayn doontaa daalka muruqa. Marka uu jiro daal muruq ama daal fiber, waxaan dhihi doonaa waxaa jiray sidoo kale waxaa jiray tababar xoog leh ka dib. Taasi waa sababta xanuunka uu uga soo muuqan karo jirka oo dhan iyo sida qoriga si fiican u yaqaan sida looga takhaluso. Markaad dhaafto, waxaad ogaan doontaa sida dareenkaasi u baaba'ayo si dhakhso ah sababtoo ah waxay door bidaa soo kabashada.
Maadaama ay tahay duugis, waxaan ognahay inaan la joogi doono isaga firfircoonida iyo hagaajinta wareegga. Maxaa ka dhigaya jirka oo dhan ogsijiin sida uu u qalmo. Sidaa darteed, ma aha lagama maarmaan in la sameeyo xoog, laakiin kaliya madaxa ku habboon, waxaad mari kartaa lugaha oo aad illoobi kartaa daal iyaga ku jira, taas oo ay ugu wacan tahay hagaajintan wareegga. Taasi miyaanay faa'iido weyn ahayn?
Caawinta cudurrada daba-dheeraada
Saldhigeeda ugu weyn waa awooda lagu macsalaameeyo xanuunka. Sidaa darteed, ma jiraan wax la mid ah codsashada marka ay jirto sidoo kale cudurrada daba-dheeraada sida arthritis-ka. Iyada dhexdeeda, xanuunka iyo qallafsanaanta ayaa ah qaar ka mid ah calaamadaha ugu caansan. Sidaa darteed, si loo yareeyo iyaga, ma jiraan wax la mid ah duugista jilicsan ee si degdeg ah oo waxtar leh sida midka ay bixiso qoriga duugista.
Ma aha oo kaliya xanuunka murqaha ee ka yimaada jimicsiga kuwa bartilmaameedka u ah daaweyntan. Laakiin waxaa dheer, qandaraasyadu sidoo kale waa nidaamka maalinta. Sababtoo ah waqti badan oo aan ku qaadaneyno fadhi ama sababtoo ah xawaaraha nolosha ee aan ku hogaamineyno. waa wax caadi ah in guntimo lagu yeesho qaybta garbaha, afka ilmagaleenka ama sidoo kale aagga lumbar. Markaa, dhamaantood, gariirka lagu sii daayay qorigani waa mid ka mid ah daawaynta ugu fiican. Macasalaama xiisadda muruqa.
Waxay wanaajisaa dhaqdhaqaaqa jirka
Inkasta oo laga yaabo in meelaha qaarkood aynaan u dulqaadanaynin duugista si fiican, waa run in si ballaaran loo hadlo, qorigu waa mid ka mid ah fikradaha ugu fiican. hagaajinta dhaqdhaqaaqa jirka oo dhan. Tan iyo markii aan yareyno dhammaan xiisadaha, waxaan ogaan doonaa sida aan u helno dhaqdhaqaaq dheeraad ah tan iyo markii ay dedejiso nuugista dhammaan nafaqooyinka si loo hagaajiyo unugyada. Tani waxay keenaysaa soo kabasho aad u dhakhso badan.
Nasasho badan oo noloshaada ah
Haddii aan hore u soo sheegnay qandaraasyada, waxaa cad in aan sii wadno ka hadalka wax kasta oo iyaga soo saara waxaana ka mid ah arrimaha ugu cadcad ee walaaca. Sidaa awgeed Waad ku mahadsan tahay duugista, laxankooda iyo cadaadiska la saaray waxaanu ogaan doonaa sida jidhku u debecsan yahay oo nasashadu ay nolosheenna u soo geli doonto. Dabcan, marka aan macsalaameyno waxaas oo dhan, waxaan heli doonnaa firfircooni badan iyo tamar badan, sidaas darteed qoriga duugista waxaan sidoo kale dareemi karnaa wax kasta oo mahad leh madaxyada kala duwan ee loogu talagalay kooxaha murqaha ee kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Dhammaan faa'iidooyinka qoriga duugista